Njikọ njikọ chaja EV, chaja ebugharị ebugharị, chaja ngwa ngwa DC - Mida
Anyị dakọtara na ụdị ụgbọ ala nkwụnye niile
Weta ahụmịhe ụgwọ kachasị na ụlọ ọkwọ ụgbọ ala EV ọ bụla. Ngwọta chaja nke ụlọ anyị gụnyere nrụnye na ịrụ ọrụ nke ebe cha cha mara mma ma na -enye ohere ịnweta ngwugwu zuru oke nke ọrụ ịkwụ ụgwọ smart.
Nye ndị ọrụ na ndị ọbịa ihe ngwọta chaja dị mfe iji. Site na nghọta data agbakwunyere, njirimara njikwa yana ọrụ sara mbara, a ga -ahụ na ịkwụ ụgwọ na ọnọdụ azụmahịa gị dị mma yana enweghị nlebara anya.
Mee ka ndị ọkwọ ụgbọala gị nwee ahụmịhe nchaji enweghị nsogbu ebe ọ bụla ha na -aga. N'inweta ihe karịrị puku isi ebubo ọha gụnyere ihe karịrị 800 ngwa ngwa na UK, kaadị chaja na ngwa nke NewMotion na -enye. MIDA Group EV Charger Station
Nabata na MIDA Group
Shanghai Mida EV Power Co., Ltd. bụ onye nrụpụta teknụzụ ọgbara ọhụrụ nke ngwa eletriki ụgbọ eletriki eletriki, dị ka onye nrụpụta EVSE ọkachamara, MIDA Group na-elekwasị anya n'inye ndị ahịa akụrụngwa nrụnye ọkachamara nke dị nchebe, rụọ ọrụ nke ọma ma kwụsie ike. Ngwa MIDA nke EV na -agbakwunyere ụlọ na ahịa azụmaahịa dị n'ọhịa chaja EV, gụnyere ụdị njikọ EV na chaja sockets, eriri chaja EV, chaja cha cha ebugharị, ihe nkwụnye EV, CCS Combo 2 njikọ & inlets, CCS Combo 1 Connector , Nkwụnye CHAdeMO, Ụlọ Nchaji EV, Wall Charger, DC Charger Station, EV Charger Moudle na EV Ngwa. Ngwaahịa anyị niile Nweta CE, TUV na UL Certificate. Otu MIDA nwere ahụmịhe ụlọ ọrụ bara ụba, na -anabata nzaghachi sitere n'aka ndị ahịa ọ bụla, na -agbakwa mbọ mgbe niile ịgbasa ọrụ ngwaahịa yana melite arụmọrụ ngwaahịa. Ọrụ OEM na ODM dị. Ngwaahịa anyị na-ewu ewu na Europe, Amerịka, Eshia wdg. Ugbu a, Mida Group Attaa Ntị maka Mmepe nke Mmepụta Nchekwa onwe ọhụrụ. Anyị kpebisiri ike ịbụ onye isi ụlọ ọrụ na onye nrụpụta ihe.
Ụlọ ọrụ MIDA EV
Mepụta Line 2
N'ogbe Price China China DC Ndenye EV chaja ...
400A CCS Combo 2 nkwụnye Liquid-mma Nchaji Gu ...
Mkpọchi electromagnetic Maka Ike ụgbọ ala eletriki ...
DUOSIDA 16A 32A 3 Sose Type 2 Socket with inte ...
10M 32A 40A Type 1 EV Nchaji Extension USB ...
American 150A CCS2 ka CCS1 nkwụnye ụgwọ ngwa ngwa ...
150A 200Amp CCS Ụdị 2 Socket DC Fast Charge In ...
USB chaja EV
Ebe Nchaji EV